Finfinnee: Guyyaan Hojjtoota Addunyaa (May day) har’a qophiilee adda addaatiin Paarkii Shaggaritti haala tamsa’ina vaayirasii yaada keessa galcheen yeroo 132faf akka kabajamu ibsame.
Koreen raawwachiistuu hojii Konfedereeshinii Hojjettoota Itoophiyaa ibsa dheengadda baaseen akka eeretti, ayyaanicha sababa koviid-19n walittiqabamanii ayyaaneffachuun rakkisaa ta’us sadarkaa Finfinnee qofatti bakka hojjettoonni murtaa’oon qofti argamanitti mataduree, “Vaayirasii koronaa ittisaa; gurmaa’uun nageenyaafi omishtummaaf ni hojjenna” jedhuun Paarkii Shaggaritti akka kabajamu ibsameera.
Hojjetoonni Itoophiyaa weerara vaayirasii koronaa ittisuufi nageenya eegsisuurratti tattaaffii qaamolee mootummaafi mitmootummaa akkasuma hojjechiistota wajjin eegalan cimsanii akka ittifufanis konfedereeshinich gaafateera.
Konfedeereeshinichi filannoo biyyaalessaa 6fa irratti loogamleessa ta’ee leenjii filattootaa kennuufi hubannoo uumuutti dabalee paartiilee morkattootaatiif waltajjii qopheessuufi filannicha taajjabuuf Boordii Filannoo Biyyaalessaarraa eeyyama argatee socho’aa akka jiru ibsa kan kennan pirezidaantiin konfedereeshinichaa Obbo Kasaahun Foollee ibsaniiru.
Hojjettoonni kaardii filannoo hinifudhanne yeroo hafe keessatti akka galmooftaniifi mirga dimokraatawaa filachuusaaniitti akka fayyadaman waamicha dhiyeessaniiru.
Gaazexaa Bariisaa Ebla
Previous Erga jijjiirraan Birrii haaraa eegalamee akkaawuntiiwwan haaraan miiliyoona 2 banamuun
Next Bulchiinsi Magaalaa Goototaaf Tajaajila Yaala Bilisaa Akka Argatan Murteesse
Erga jijjiirraan Birrii haaraa eegalamee akkaawuntiiwwan haaraan miiliyoona 2 banamuun